Ngingalithola kanjani ishadi lokuzalwa lamahhala? - Ishadi
Phinda Wenze Kabusha
Ngingalithola kanjani ishadi lokuzalwa lamahhala?
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - Isondo Lamashadi Wokuzalwa Lamahhala
6 Izindawo Zokuthola iIshadi Lokuzalwa Lamahhala
We bafowethu! Uyemukelwa futhi kuLavendaire, ngiyaqhubeka nalolu chungechunge lwamathuluzi wokuzitholela okuthokozisayo esiteshini sami, ngakho-ke uma uphuthelwe i-athikili yokuqala ebengikhuluma ngayo ngamakhadi we-tarot nokuthi ungawasebenzisa kanjani njengokuqala ngoba ngiyaqala namuhla ngijabule kakhulu ukukhuluma ngezinkanyezi. Ukufundwa kwezinkanyezi kuyinto ebengibhekene nayo impilo yami yonke, empeleni kusukela ngisemncane, futhi akusikho ukuthi ngiyisazi sayo noma yini. Kepha bengikuthanda kakhulu ukufunda izinkanyezi nokufunda ishadi lomdabu ngonyaka odlule kunokuba ngifunde incwadi kaSteven Forrest ethi Inner Sky.
Ngifunde okuningi ngokufunda ishadi lendalo, okuningi ngokufundwa kwezinkanyezi nokuthi kusho ukuthini. Ngithole ukuthi ngazi kakhulu ngokufundwa kwezinkanyezi kunomuntu ojwayelekile. Ngakho-ke le ndatshana ingeyomuntu ojwayelekile.
Uma ungungoti asikho isidingo sokubheka lokhu. Kepha ngifuna ukuchaza ukufundwa kwezinkanyezi ngokujulile kunezimpawu zakho zelanga. Ngakho-ke lungela i-athikili emnandi! Izinto zokuqala kuqala, ake sicacise: isayensi yezinkanyezi ukuhlola kwesayensi kwezindikimba zasezulwini, ngakho-ke kusekelwe emaqinisweni nasekucwaningweni, futhi ukubhula ngezinkanyezi kungukuchazwa kwezindikimba zasezulwini, okungukuthi, nansi indlela esihumusha ngayo okusezulwini.
Kuyizinkondlo, ubuciko. kodwa kumnandi impela ukuthi yonke into inencazelo futhi akuyona eyezesayensi ncamashi, kepha ingaphezulu kobuciko. Manje liyini ishadi lokuzalwa? Ishadi lakho lomdalo lokufundwa kwezinkanyezi ngokuyisisekelo liyisithombe esibhakabhakeni ngesikhathi nasendaweni lapho wazalelwa khona, lapho wazalelwa khona emhlabeni nesikhathi esiqondile, isithombe salokho okusezulwini.
Luhlobo lwemephu yawo wonke amaplanethi, ilanga nenyanga. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukucacisa mayelana nesikhathi ngqo ozalwe ngaso ngoba njalo ngehora noma amabili ishadi lakho lokuzalwa liyashintsha ngoba isibhakabhaka siyahamba - cha, umhlaba uyahamba - futhi ushukumisela isithombe sesibhakabhaka sazalwa uma ungathola ishadi lakho langempela le-natal r: uma ungumShayina, ngiyazi ukuthi kunenkolelo-ze kusiko lamaShayina, ngenxa ye-feng shui nayo yonke leyo nto, ungalokothi unikeze usuku / isikhathi sakho sokuzalwa kunoma ngubani laphaya. Ngakho-ke angifuni ukuthumela ishadi lami lokuzalwa ngqo noma yini.
Kepha sikholwa ukuthi uma othile esazi usuku lwakho nesikhathi sakho sokuzalwa, bazokwazi okuningi ngesiphetho sakho futhi abantu bangakusebenzisa kuwe. Ngakho-ke lokhu yinto kimi uqobo - ngoba umama wangithonya - ngokwami ​​ngithanda ukuyigcina iyimfihlo ethe xaxa, ngakho-ke ake nazi nina. Ngakho-ke ulithola kanjani ishadi lakho lendalo? Kunamawebhusayithi amaningi lapho ungafaka khona lolu lwazi.
ICafé Astrology ingenye, i-Astro.com ingenye. Futhi kunezinhlelo zokusebenza eziningi zeselula ongazisebenzisa ukuhlola ishadi lakho lokuzalwa.
Uhlelo lwami oluthandayo lokufundwa kwezinkanyezi luyinkanyezi. Le yesimanjemanje futhi i-chic futhi ichaza ishadi lakho lokuzalwa nayo yonke imininingwane ngendlela ecoceke kakhulu. Ngakho-ke hlola lezi - ngizozixhumanisa ngezansi.
Manje ake sikhulume nge-triad yoqobo, okuyi-sun yakho, inyanga, ne-ascendant. Kwesinye isikhathi abantu baphinde babhekise ku-ascendant njengophawu lwabo 'lokukhuphuka'. Ngokuvamile lezi yizimpawu ezintathu ezibaluleke kakhulu eshadini lakho lokuzalwa, ngakho-ke ungabona abanye abantu abanesithakazelo sangempela ekufundweni kwezinkanyezi, bazobhala zonke lezi zimpawu ezintathu ngoba zontathu zibalulekile ekubalweni ngaphezu kwesibonakaliso sakho selanga, isibonakaliso sakho selanga nje kulenga osukwini owazalwa ngalo, wawukusiphi isikhathi sonyaka.
Ngazalwa ngo-Okthoba ngakho nginguLibra. BTW, nginale diary lapho ngenza khona amanothi amaningi encwadini yezinkanyezi engangiyifunda ukuze ngibhekise kuyo ngezikhathi ezithile. Ngokuvamile, isibonakaliso sakho selanga simele i-ego yakho, ubuntu bakho, isithombe sakho.
Ingumongo wokuthi ungubani. Isibonakaliso sakho senyanga simele ubuntu bakho obungokomzwelo. Inyanga yakho ukuzwela kwakho, imizwa yakho, imizwa yakho, imizwa yakho, inhliziyo yakho.
Kwesinye isikhathi abantu babhekisa kusibonakaliso sabo senyanga ngaphezu kwesibonakaliso sabo selanga ngoba inyanga yakho iyisimo sakho esingokomzwelo futhi uzizwa kakhulu ngaleso sibonakaliso. Futhi noma ngabe yisiphi isibonakaliso osenyangeni yakho, lokho kuyinkomba yalokho okukujabulisa nokuthi yini okwenza uzizwe ugcwalisekile. Yebo, ngiyinyanga yeSagittarius kanti iSagittarius iyinhlangano yokuzijabulisa nokuhlola, izama izinto ezintsha, futhi imvamisa nami ngiyakwazi ukuzihlobanisa nalokho.
Uphawu lwakho olukhuphukayo noma 'olukhuphukayo' empeleni luyisifihla-buso sakho emhlabeni. Yindlela abanye abantu abakubona ngayo. Cabanga ngakho njengombono wokuqala.
Abanye abantu bangakubona ngandlela thile lapho behlangana nawe okokuqala, bese kuthi lapho bekwazi bakubone, 'O, ngempela ufana nohlobo oluhlukile lomuntu.' Abanye. Futhi ukuze wazi, isibonakaliso sami esikhulayo yiGemini.
Ngendlela, ukuze ungenzi le ndatshana ibe yinde kakhulu, angizukungena emininingwaneni yencazelo yesibonakaliso ngasinye, iplanethi, nakho konke ngoba kunezinsizakusebenza eziku-inthanethi ngakho. Empeleni ngizokwenzela amanothi alula ozowafunda kokuthunyelwe yibhulogi yami, amagama asemqoka asheshayo namanothi kumlingiswa ngamunye, iplanethi, noma indlu. Ngemuva kokuthola ishadi lakho lokuzalwa, ungabhala phansi uphawu lwakho, inyanga, nesibonakaliso esikhulayo.
Futhi-ke ungabheka amanothi engiwenze kubhulogi lami bese ubona ukuthi yini ehambelana nomlingiswa ngamunye. Enye indlela yokuqonda uphawu lwakho loqobo lwe-triad ukusifingqa ngomusho ofana nalona: 'Ngingu __, ngomphefumulo ka-__, gqoka imaski ka -__' Kuya ngophawu lwakho, uzothola incazelo kanye i-archetype yesibonakaliso sakho bese uvele uphakamise amagama. Kimi ngokwesibonelo: Ngingumculi onomphefumulo wesazi sefilosofi ogqoka isifihla-buso sothisha ngoba umculi uyilokho okuyiLibra, isazi sefilosofi siyi-archetype yenyanga yeSagittarius kanti uthisha ungomunye wama-archetypes we iwele.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kunengqondo futhi ngiyethemba ukuthi kusizile. Ngakho-ke lokho kwakuyisisekelo. Ulungele ukudonsa ujule? Asambe! Ake sikhulume ngezingxenye ezikhona zeshadi lokuzalwa.
Njengoba ngishilo ekuqaleni, kunezimpawu eziyi-12, uzizwile ngaphambili - ama-Aries, iScorpio, iLibra, neLeo - konke lokhu ngiyazi ukuthi kuphelile. Futhi-ke kunamaplanethi ayishumi, nangemva 'kwamaplanethi'
Ngabe isondo lami lokuzalwa lisho ukuthini?
I-umbuthano wokuqalayiizinkanyeziisondo.I-Izingcezu eziyi-12umele i-12 izimpawu zeiizinkanyezi.I-indilinga yangaphakathi lapho imeleiUmhlaba. Ku-eyakhokomuntu siquizinkanyezi(ishadi lakho lokuzalwa), lowo mbuthano wangaphakathi umeleiizixhumanisi, noma indawo ngqo, ye-ukuzalwa kwakhoindawo.
Yiliphi ishadi lokuzalwa lamahhala elingcono kakhulu?
Izazi zezinkanyezi. I-Astrodienst inikeza ikhwalithi yobungcwetiukuzalwaamashadi, futhi isayithi lisebenza njengekuhleinsiza yonke yezinkanyezi nabaqalayo ngokufanayo. Funa iIshadiUkudweba / Ukuphakama kokuyisisekeloishadi lokuzalwa. Okwakhoukuzalwaidatha iyagcinwa futhi itholakale njalo lapho uya kwisiza se-Astrodienst kusuka kukhompyutha yakho yasekhaya.1. 2019.
Ingabe amashadi wokuzalwa anembile?
Ukuthola imibiko ngokunemba okungaphezu kwama-90%. Uma ucabanga ukuthi izibalo zenziwe kahle, kungaba nge-AstrologicalAmashadi Okuzalwakukhonaenembilenoma cha akuyona inkinga. Ukunemba kwe-Ishadi Lokuzalwaukutolika kuncike ku-ASTROLOGER owenza ukutolika.
Ziyini izimpawu ezinkulu ezintathu?
Ekufundweni kwezinkanyezi, yakhoOkukhulu 3kufaka phakathi i-Sun, iNyanga, ne-Ascendant yakho. Ngayinye yalezi zinto ezibekiwe, kanye namanye amaplanethi ngaphakathi kweshadi lakho, lawula isici esithile sobuntu bakho nempilo yakho.19. 2021.
Iyini indlu ye-11 ekufundweni kwezinkanyezi?
I-Indlu Yeshumi Nanyekulapho uqala khona ukungena emphakathini, nokwamukelwa okuthola lapho. Kuyinto yendabukoindlulabangane, kepha futhi ludlulela nakwabasebenza nabo nasemibuthanweni yomphakathi. Le yiindluwe-Aquarius no-Uranus / uSaturn.amashumi amabili. 2019.
Lithini ishadi lokuzalwa eliphelele?
Ngakho ekahleishadi lokuzalwakungaba lapho wonke amaplanethi akhona eMoolatrikona noma izimpawu zokuphakanyiswa futhi akhona eKendra. Isibonelo esisodwa singaba ngokulandelayo: isb. Ukukhuluma ngokuzenzisa ... amaplanethi awahambi njengoba sifuna ...
Ingabe isikhathi sibalulekile eshadini lokuzalwa?
I-isikhathi sokuzalwaayisetshenziswanga kuphela ukuthola ukuma kwamaplanethi kepha futhi ne-Ascendant yakho (Rising Sign). Lokho kubalwa bese kunquma izulu kanye nendlu. Ngakho-ke thola eyakhoukuzalwaisitifiketi ngaphambi kokuthola i-ishadi lokuzalwayenziwe.
Ngabe isikhathi sokuzalwa siyadingeka yini kusayina lwenyanga?
?Isikhathi sokuzalwaakuhlali njalokuyadingekangobaInyangaayiguqukiizimpawunsuku zonke. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi wazi eyakhoIsibonakaliso senyangangaphandle kwe-isikhathi sokuzalwa, izinsuku ezithile. ? Uma ngabeInyangakushintshiweizimpawuosukwini lwakho lokuzalwa, lesi sibali sizokutshela okungu-2 kwakho okungenzekaizimpawu zenyanga.
Ngiyithola kanjani iBig 3?
KutholaeyakhoOkukhulu 3, uzodinga ikhophi yeshadi lakho lokuzalwa eligcwele. Uzodingayazi i-isikhathi owazalwa ngaso, usuku owazalwa ngalo, nendawo owazalelwa kuyobalaishadi lakho. Ekufundweni kwezinkanyezi, yakhoOkukhulu 3kufaka phakathi i-Sun, iNyanga, ne-Ascendant yakho.19. 2021.
Ungaba uphawu kathathu?
Inikuyakwenzakusho ukuba kabili noma akathathuZodiacuphawu?Wenamhlawumbe ngizwe othile echazwa njengePisces ephindwe kabili, uLeo ophindwe kabili, noma akathathuIGemini. Ukuphinda kabili kusho ukuthi ezimbili ezinkulu ezintathu ziyafanauphawu. Lapho iLanga, iNyanga, kanye nokuPhuma kuyefanauphawu, lokhokathathu.
Ingabe likhona isondo lokuzalwa lamahhala lokufundwa kwezinkanyezi?
Isondo Leshadi Lokuzalwa Lamahhala Lokusebenzisana Elimahhala: Ithuluzi elilandelayo libala futhi libonise ishadi lakho lokuzalwa, ngokuya ngosuku lwakho lokuzalwa, isikhathi nendawo. Qiniseka ukuthi uzulazula ngaphezulu kwezakhi ezahlukahlukene zeshadi lokuzalwa uphinde ufunde ukutolikwa kokudonsela into ngayinye. Ama-asteroid wokuzikhethela, uhlu lwezici, nokuningi kuyatholakala.
Yini odinga ukuyazi ngevili laseNatali?
Ibizwa futhi ngokuthi 'ishadi laseNatali'. Imininingwane kufanele ibe nenembile ukuthola umphumela onembile. Inani elincane kakhulu lemininingwane efana nendawo, usuku nesikhathi kuyadingeka ukubala ishadi lokuzalwa. Ishadi elinamasondo elihlukaniswe izigaba eziyishumi nambili. Isigaba ngasinye siqukethe igama lezimpawu eziyishumi nambili ezihlukile zezinkanyezi.
Ngingasitholaphi isibali sokubala samahhala sokuzalwa?
Ama-asteroid wokuzikhethela, uhlu lwezici, nokuningi kuyatholakala. Bona futhi umshini wokubala weshadi lokuzalwa lethu eligcwele ngokuhumusha okuningiliziwe. Lokhu kuyiswe embikweni weShadi le-Free Natal. Bona futhi imibiko yethu ephelele kanye nesici sethu sokuhumusha ishadi lokuzalwa lamahhala.
Ingabe u-Ephreli uyinyanga enhle yeScorpio?
Kusho ukuthini ukuzalwa ngoNovemba 9?
Yimuphi umuntu odumile onosuku lokuzalwa ngoSepthemba 10?
Yini i-Mars eLibra ehehwa yiyo?
Buyini ubuntu bePisces?
Bathembeke kakhulu, banobumnene futhi baphana ngokungenamibandela kubalingani babo. Ama-Pisces ngabathandi abanothando abanesidingo sokuzwa ukuxhumana kwangempela nabalingani babo. Ubudlelwano besikhathi esifushane nokuzidela ...
Mashi 23 Usuku lokuzalwa lomuntu
Yini i-horoscope kaMashi 23?
INode yeNyakatho ku-Astrology
Ukufana kokuhambisana kweTaurus Sun Sign
Disemba 26th Usuku lokuzalwa komuntu
Yini i-horoscope yangoDisemba 26?
I-Aquarius Feb'13 Horoscope
Kusho ukuthini uma wazalwa ngoFebhuwari 13?
Novemba 21 Usuku lokuzalwa lomuntu
Ngabe uNovemba 21 uyiScorpio noma iSagittarius?
I-Taurus Oct'12 Horoscope
Julayi 9 I-Horoscope yokuzalwa
Luthini uphawu lwe-zodiac lwangoJulayi 9?
NgoJuni 17th Usuku lokuzalwa komuntu
I-Aquarius May'13 Horoscope
Yiziphi izimpawu okufanele u-Aquarius azigweme?